Raysal wasaaraha: Sweden waa wadan qalbi caruureed leh oo si fudud loo qiyaani karo
Saturday November 21, 2015 - 01:33:45 in Wararka by Web Admin
Raysal wasaaraha Sweden Stefan Löfven ayaa shalay ka dhawaajiyay hadal dood badan dhaliyay, ka dib markii uu soo bandhigay dhowr arimood oo lagu soo kordhinayo la dagaalanka argagixisada. Hadalka raysal wasaaraha ayaa ka dambeeyay ka dib markii
Raysal wasaaraha Sweden Stefan Löfven ayaa shalay ka dhawaajiyay hadal dood badan dhaliyay, ka dib markii uu soo bandhigay dhowr arimood oo lagu soo kordhinayo la dagaalanka argagixisada. Hadalka raysal wasaaraha ayaa ka dambeeyay ka dib markii Sweden ay kor u qaaday u diyaar garowga weerar argagixiso oo la aaminsanyahay in uu wadanka ku soo fool leeyahay.
Booliska Säpo ayaa shalay soo qabtay nin lagu magacaabo Mutar Muthanna Majid oo qaxooti Syrian ah kaasoo looga shaki qabo in uu ka tirsanyahay ururka ISIS isla markaana uu qorsheynayay in uu weerar argagixiso ka fuliyo Sweden. Ninkaan ayaa laga soo qabtay degmada Boliden ee ku taala waqooyiga Sweden.
Raysal wasaaraha oo ka hadlay arimo badan, isla markaana soo bandhigay in dowladiisu ay kordhin doonto sirdoonka iyo dhagaysiga telefoonada iyo barnaamijyada internetka sida Skype iyo Viber, ayaa sheegay in dowladihii hore ee Sweden ay ahaayeen kuwo si fudud loo qiyaani karin oo qalbi caruureed leh. Hadalka raysal wasaaraha oo ahaa hadal xoogan isla markaana aan horay looga baran ayaa dhaliyay dood ka dib markii dhowr jeer lagu celceliyay su’aalo ku saabsan in dowladiisa hadda jidha si fudud loo qiyaani karo?
Arinta ku saabsan in Swedishku ay leeyihiin qalbi caruureed si fudud loo qiyaani karo, ayaan ahayn mid cusub iyadoo aan horay u maqalnay hadalo nuucaas ah. Dadka qaar ayaa sheegay in Sweden tusaale ahaan ay si fudud ku bixiso sharciga iyaga oo aan dadka weydiin su’aalo adag ama iska dhagaysta hadalo been abuur ah. Waxaa sidoo kale tusaale ah, in jaaliyado badan oo ajaanib ah ay dowlada lacag uga cunaan mashaariic macno daro ah. Waxaa intaas sii dheer in dowladu aysan waxba ka qaban dhalinyarada u safraysa dagaalada, iyaga oo la socda in ay safreen isla markaana soo laabteen.
Hadaba su’aashu waxay tahay, Sweden ma wadan si fudud loo qiyaani karaa? Ku darso firkadaada